Mogadishu Journal » 2017 » October » 11
Mjournal :-Ciidamada ammaanka maamulka Somaliland ayaa waxa ay soo saareen amaro lagu sugayo ammaanka guud ee degaanada Somaliland, gaar ahaan caasimadda maamulka oo ah Hargeysa. Afhayeenka Ciidanka Booliska maamulka Somaliland Gaashaanle Feysal Xiis Cilmi oo warbaahinta la...
Mjournal :-War saxaafadeedkii kasoo baxay Maanta Madaxda maamul goboleedyada, waxaa ka mid ahaa in ay dhiseen Gole ay ku mideysan yihiin maamulada dalka ka jira. Golaha Dowlada Goboleedyada, waxaa guddoomiye loo doortay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, halka ku...
Mjournal :-War murtiyeed ka kooban illaa 16 qodob ayaa goor dhow laga soo saaray shirka Wadarashiga ee Kismaayo ugu socday Madaxda dowladda Goboleedyada kala ah Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Galmudug. War murtiyeedka oo goor dhow heshay saxaafada ayaa...
Mjournal :-Maxkamad ku taalla dalka Talyaaniga ayaa waxa ay xukun xabsi Daa’in ah ku xukuntay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in uu jirdil, kufsi iyo Dil u geystay dad Tahriibayaal ah oo doonaayay in ay gaaraan Qaaradda Yurub, iyaga ka imaaanaya Waqooyiga Qaaradda Africa....
Mjournal :- Al-Shabaab ayaa saakay aroortii waxa ay weerar qorsheysan ku qaadeen Saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Milateriga Soomaaliya ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarkaan ayaa ka dhacay fasriisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin wadada Basra, gaar...
Mjournal :-Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in shirkii Wadatashiga ee u dhaxeeyay Madaxda maamul goboleedyada in xalay la soo gaba gabeeyay, iyadoo maanta lagu wado in la soo saaro war murtiyeed. Sida ay sheegayaan wararka Madaxda ka qeyb galeysay shirka ayaa...